प्रेम वियोगमा विक्षिप्त एक युवालाई सन्तले यसरी बँचाए ! « Gajureal
प्रेम वियोगमा विक्षिप्त एक युवालाई सन्तले यसरी बँचाए !
प्रकाशित मिति: १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०९:११
प्रेम बियोगमा विक्षिप्त भएका एक युवा भौतारिदै एउटा मन्दिर परिसरमा पुग्नासाथ एकजना सन्तलाई भेटेपछी…
ति युवकलाई सन्तले सोधे – हे बालक, देख्दा तिमी हट्टाकट्टा छौ तर अनुहारमा यति धेरै पिंडा किन देख्दैछु ?’
युवकले भने : ‘बाबा जी, बाँचुन्जेल संगै रहने कसम खाएकी मेरी प्रेमिकाले मलाई छोडेर गइन् । म उनको मायाँले तड्पिएर हिंड्दैछु ! म उनलाई बिर्सने नसक्ने भएको छु !
जवाफ दिँदै सन्तले भने – ‘सुन बालक, तिमीले मान्छेको केवल शरिरमात्र देखेका छौ, मन देखेका छैनौ । प्रकृतिले प्रदान गरेका इन्द्रीयहरुलाई आफ्नो सान्सारिकतासंग नापेर परिभाषित गरेका छौ । त्यो तिम्रो मनको आशक्तिमात्र हो। तिमी तिम्री प्रेमिकाको जीवन, स्वास र सिंगो शरीरलाई मायाँ गरिरहेको छैनौ । छानीछानी उनको शरीरका केहि अंशमा तिम्रो मस्तिस्क ठोकिएको छ । तर त्यो वासनायुक्त मायाँ, आकर्षण केवल तिमी आफैले सृजना गरेको भ्रम हो ! तिमी यसलाई बिर्सिदेउ ।
युवकले भने : म कसरी बिर्सन सकौंला र बाबा जी, के यो सम्भवा होला ! तपाईंसंग केहि उपाय छ त ?
बाबा जी : अवश्य ! म जे भन्छु त्यो गर, तिमीले यो समस्याबाट मुक्ति पाउँन सक्ने छौ । सबैभन्दा पहिला तिम्रा आँखा बन्द गरेर कल्पना गर- आफ्ना अगाडी तीनवटा भाँडा राख । हातमा एउटा धारिलो हतियार कसिलोगरी समाउ ।
अब तिमीलाई धोका दिएर जाने ति युवतीलाई भुइमा लडाएर क्रमिक रुपामा उनको स्थुल शरीरलाई टुक्र्याउँदै जाउ ! त्यहाँबाट निस्कने मासुलाई एउटा भाँडोमा, हड्डीलाई अर्कोमा र कपाल वा रौँ लाइ अर्को भाँडो राख । अब सोच त तिमीलाई आकर्षित गर्ने ति चिजहरु त्यो शरीरमा थिएनन् । त्यो त केवल हड्डी, मासु र कपाल मिलेर बनेको एउटा पिण्ड थियो ! तिमीलाई विक्षिप्त बनाउने आकर्षक चिजहरु त तिम्रो मनबाट सृजित भ्रममात्र थिए ! आफ्नै आनन्दका निम्ति कल्पित वासनायुक्त आशक्ति मात्र थियो, हैन त ?’
युवाले आँखा खोल्दै भने – वाह बाबा जी, तपाईं धन्य हुनुहुन्छ ! भ्रमको जालो बुनेर आफ्नै जीवनलाई दिग्भ्रमित गर्ने त स्वयम् हामी मानिस नै रहेछौं !
प्रजातन्त्र दिवस : हिजो, आज र भोलि !
By Team Gajureal.com हिजो !राजाका लागि प्रजातन्त्रशासन गर्ने काम मात्रै थियो,प्रजाका लागि प्रजातन्त्र,स्वतन्त्रताको नाममात्रै थियो